izinguguko zigqame ngaphandle kwi-avanza | Isolezwe
izinguguko zigqame ngaphandle kwi-avanza
Isolezwe / 14 June 2012, 12:00pm / NGQESHE BUTHELEZI
IMOTO: TOYOTA AVANZA
BESE ngikhathele ukuphuma ngingena nobuso be-radio njalo uma ngehla noma ngigibela kwi Toyota Avanza. Phela i-Avanza entsha isashaya nge-radio endala thina esasiyibiza nge- stereo okuthi uma usungena endlini uphume nayo ukuze abafana bangadlaleli kuyo. Akuzona zonke izinhlobo ze-Avanza eziphuma nalolu hlobo lwe-radio, kodwa lena kubonakala kuyiyo ethandwa kakhulu ngenxa yenani layo. Ngiyavuma ukuthi ngaphandle bayishintshile impela kodwa ngaphakathi izihlalo isigqiki soqobo uma uzazi izimoto zangempela. Into abaqinise kakhulu kuyo kule Avanza izindawo zokubeka impahla namakhosombe.
Ngakwezokuphepha balinyusile izinga, kanti lena entsha isiyawonga u-petrol futhi nasemgwaqeni iyabambelela. Engikuqaphelile ngesikhathi ngihamba ngayo ukuthi akumele ulinde lize luthi mba phansi uthi luka- petrol ngoba uma sekunjalo ingena izwele ephaketheni.
Le Avanza eyi-second generations MPV ayinayo imbangi ngqo kulesi sigaba sezimoto.
Ihlukene ngezinhlobo ezintathu. Kukhona eyi S esesigabeni esiphansi, ilandelwe yi-SX ephakathi nendawo bese kuvala i-TX. Lena ebesithole ithuba lokuyivivinya ngephakathi nendawo i-SX.
Cha bandla yona uma uyibhekisisa kahle ngaphambili ushintsho luyabonakala njengoba besebenzise yona ukuveza ubuso obusha bezimoto zabo. Kuzo zonke izinhlobo igrille igqize ngombala ofanayo nomzimba wemoto ngaphandle kwe TX egqize nge chrome yase iphuma namalambu enkungu.
Abagcinanga lapho iphinde yagqiza nge chrome ende ngaphezulu kwe-number plate kanye ne-spoiler osibona kalula uza le kude ngoba sithe chwa phezulu esicabheni sangemuva. Noma ilayisha abantu abayisikhombisa kodwa akumele uthathe ushansi ngoba njengoba kunomoya kangaka kulezi zinsuku iyaphephuka emgwaqeni. Uma uyicindezela ufika ku 140km/h uyaqala ukuyizwa igcwala umgwaqo.
Kukhona izinhlobo ezimbili zezinjini okuyi 1.3 litre ne 1.5 litre ezisebenzisa u-petrol. Noma lungekho ushintsho olutheni ezinjinini uma kuqhathaniswa ne-Avanza endala, kodwa isisindo sale moto basehlisile ngo 20kg. Azidli kakhulu ku-petrol ngoba injini engu 1.3 litre isebenzisa amalitha angu 7,7 ngo 100km, bese kuthi i-1.5 automatic isebenzise angu 7,6 ngo 100km, kanti eshintshwayo idla upetrol ongu 7,2 wamalitha ngo 100km.
Injini engu 1.5 litre ikhiqiza amandla angu 76kW kanye ne torque engu 136Nm bese kuthi lena engu 1.3 litre ibe namandla angu 67kw kanye ne-torque engu 117Nm.
Isiteringi sakhona esiyi- Hydraulic Power Steering basishintshile bafaka i-Electric Power Steering (EPS).
Avanza 1.3 S – R155 900 (incl. VAT and emissions’ tax)
Avanza 1.3 SX – R168 800
Avanza 1.5 SX – R175 500
Avanza 1.5 SX AT – R189 600
Avanza 1.5 TX – R202 200